Ny « covid-19 » sy ny fihibohana – Ireo fiovana nentiny teo amin’ny fiainako – Blaogin'i Voniary
Vao nahare fa nisy trangana aretina tsy fantatra anarana, niforona tany Chine, aho dia nihoron-koditra, nivavabavaka ny tsy hiparitahan’izany manerana izao tontolo izao, indrindra ny tsy hidirany eto Madagasikara ! Tafiditra teto ihany moa izy io ka akory ny atao ? « Coronavirus » na « covid-19 » ny anarana nasalotra azy io !
Niaina tao anaty horohoro sy tahotra an’io aretina io ny tenako, hatramin’izay nidirany teto Madagasikara izay. Nitandrina fatratra sy niezaka nanaraka ny fepetra fisorohana rehetra ihany koa, fepetra napetraky ny fitondram-panjakana nandritra ny fihibohana. Niova ny fomba fanaoko, lasa mazoto manasa tanana matetika aho, mampiasa ny « gel désinfectant », misolo akanjo rehefa tonga ao an-trano, manao arovava sy orona rehefa mivoaka ny trano, na ho aiza na ho aiza …. Isaorako an’Andriamanitra fa mba tsy nisy voan’io aretina io tao amin’ny ankohonako ; ny krizy nateraky ny fihibohana lavareny no nisy fiantraikany mafy teo amin’ny fiainako.
Olana teo amin’ny fidiram-bola
Vao niditra tamin’ny fihibohana voalohany mantsy isika dia nikorontana sahady ny fidiram-bolako. Ny fandaharan’asa rehetra novolavolaiko dia saika maty an-karanany avokoa.
Nisy fiantraikany goavana ho an’ny mpandraharaha sy ny orinasa tsy miankina ny fihibohana lavareny, izany olana izany anefa dia nipaka tany amin’ny tokantranoko satria raha voadona ny aty, marary ny afero. Very asa nandritra ny volana vitsivitsy mantsy izahay mivady. Niaina tao anaty fahasahiranana tanteraka, noho izany, izahay mianakavy. Ny fandaniana nitombo nefa ny vola miditra tsy ara-dalàna.
Lany mandritra izany fihibohana lavareny izany izay kely nananana teo an-tanana. Ny sakafo, ny ravin-kazo sy ny karazan-javatra ilaina hisorohana ny valanaretina … Santionany amin’ireo tsy maintsy nandaniana ny tahirim-bola tao an-trano ireo, ho fitsimbinana ny aina. Ny vidin’entana moa nihalafo satria nanao ny nataony ny mpanararaotra, fa ny fahorian’ny sasany, zary fifalian’ny hafa; soa ihany fa voafehin’ny fitondram-panjakana haingana izany fiakaran’ny vidim-piainana tampoka izany.
Nandritra io fihibohana io no vao mainka mampitombo ny fahatsapako ny halehiben’Andriamanitra sy ny fahasoavany. Andriamanitra izay sady tsy mamela ny zanany ho fatin’ny hanoanana no miaro azy amin’ny hetraketraky ny fiainana. Ka na toa inona na toa inona ny fahasahirananako sy ny tsy fananako dia nahitako vahaolana hatrany izany na dia tsy voavaha zato isan-jato aza.
Hanao ahoana ny hoavin-janako?
Lavareny ny fiatoan’ny fampianarana teto amin’ny Nosy; isan’ny nianjadian’izany ny zanako. Nampanahy ahy tokoa ny hoavin’ny zanako, satria nampitotongana ny fari-pahaizany iny fiatoana naharitra tamin’ny fianarana iny; zaza hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany eo amin’ny fiainany nefa dia ratsy fiomanana, teo ny tsy fahampian’ny famerenana ny kely vita nandritra ny telo volana voalohany sy faharoa; izahay ray aman-dreny nianteherana ho tosika famenon’ny fianarana anefa variana niady tamin’ny fianana sy ny valanaretina.
Nandritra ny volana maro tsy nianaran’ny mpianatra dia nanefa ny saram-pianarana ara-dalàna aho, vola tsy maintsy aloa ireny. Tsy mitarain-tana-miempaka aho satria ny ray aman-dreny dia mila ny sekoly, ny sekoly, indrindra ny tsy miankina amin’ny fanjakana, dia mila tohana avy amin’ny ray aman-dreny, toko telo mahamasa-nahandro ny sekoly sy ny mpianatra ary ny ray aman-drenin’ny mpianatra, noho izany, mila mifanampy ireo, mila mifampitsimbina na dia samy miaina ao anaty fahasahiranana aza.
Mbola io fihibohana lavareny io no nanery ahy tsy hivoaka ny tranoko, raha tsy misy antony manokana, ho fanajako ny fepetra sy iarovako ny tenako sy ny ankohonako amin’ny valanaretina, hany ka tsaroako ho nampiadan-dratsy ny vatako ka nahatonga ahy tsy ela dia nihanahazo aina, nihalehibe nanaraka izany koa ny kiboko izay lasa nanahirana ahy indray ny nitady fomba hanenana azy ankehitriny. Nampitombo ny rarin-tsaiko ihany koa ny fihibohana.
Aoka ho mailo hatrany isika!
Ankehitriny tokoa efa voafehy ny aretina, foana miandalana ny fihibohana, miverina tsikelikely amin’ny fiainany andavanandro isika rehetra. Niverina nisokatra ny orinasa rehetra, afaka miasa toy ny teo aloha aho, eny, izahay mivady mihitsy. Na izany aza mbola mivela ny farasisan’ny fahasahiranana nateraky ny fihibohana. Niverina toy ny teo aloha indray ny fidiram-bolanay saingy tsy mbola tototra tanteraka ny fahabangana naterak’iny fihibohana lavareny iny. Efa milamindamina tokoa isika izao, na dia mbola miaina ao anaty hamehana ara-pahasalamana aza. Aoka àry isika samy tsy hisioka raha tsy tafavoaka ny ala ! Samy ho mailo sy mitohy manaja ny fepetra ara-pahasalamana hatrany, betsaka mantsy ireo firenena nandalovan’ity valanaretina ity no niverenany indray.
coronavirus, covid-19, fifanianana lahatsoratra am-blaogy, fifaninanana teny gasy 2.0, lahatsoratra am-blaogy, lahatsoratra blaogy, teny gasy, teny gasy 2.0
2 commentaires sur “Ny « covid-19 » sy ny fihibohana – Ireo fiovana nentiny teo amin’ny fiainako”
Miarahaba anao ramatoa Verenako Myriam nahazo ny laharana faharoa. Teo am-pamakiana ny asa soratrao aho dia nahatsapa fa asa soratra ahitana hevitra mirindra, voazava tsara ary voatohana amin’ny alalan’ireo ohabolana sy fomba fiteny tsara fantina. Arahabaina indrindra; Niandry ihany koa anefa aho ny vokatsoa nateraky ny fihibohana. Na izany aza dia tena ilaina ireo torohevitrao mikasika ny tokony hitandremana fa « Ramalina aza ,hono,mifehy hazo tokana. » Mitomboa hasina e!
Tena manan-karena ohabolana sy fomba fiteny tokoa ity lahatsoratra ity!